Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland Oo Ku Dhawaaqay 10ka Urur Ee Shuruudaha Buuxiyey - Horseed Media • Somali News
August 1, 2020Puntland
Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland Oo Ku Dhawaaqay 10ka Urur Ee Shuruudaha Buuxiyey
Guddiga kumeel-gaarka doorashooyinka Puntland oo maanta si rasmi ah usoo gunaanaday diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland, ayaa ku dhawaaqay tirada ururada sida saxda u buuxiyey shuruudaha.
Guddiga ayaa tartan seddex wareeg qaatay iyo qiimayn kadib waxay ku dhawaaqeen inay 10 urur usoo gudbeen wareegii ugu dambeeyey kuwaas oo kasoo baxay 17 urur siyaasadeed oo bilowgii hore is-diiwaangeliyey.
Guddoomiyaha guddiga kumeel-gaarka doorashooyinka Puntland, Guuleed Saalax ayaa ku dhawaaqay magacyada 10ka urur siyaasadeed ee sida rasmiga loo aqoonsaday kuwaas oo ugu dambayn afti dadweyne lagu kala saari doono.
Magacyada tobonka urur siyaasadeed waxay kala yihiin:
Urur siyaasadeedka runta iyo cadaalada
Urur siyaasadeedka shaqaalaha
Urur siyaasadeedka dhalinyarada
Urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinnaanta
Urur siyaasadeedka Mustaqbal
Urur siyaasadeedka Himilo
Urur siyaasadeedka Horseed
Urur siyaasadeedka Ifiye
Urur siyaasadeedka berri wal baxar wa turaab
Xisbiyada siyaasada weeye nagaca saxa ah.
Waa arin weli la mid ah,faanoole fari kana qodna.
22 kii sano ee maamulka qabaa’ilka ee Puntland uu dhisnaa,wax inaba nidaam dowli ah,oo sidii lago heshay ah,loo fuliyey na jirto.
Asaaskii Puntland ayaa si deg-deg ah loo dhisay oo cadaalad daro aad u wayn kago dhisay,oo aan xitaa la sixin. taasi oo ah in habkii wax loo waybsaday oo ku nidaamka beeleedka oo beelo badan aysan helin wixii ay xaq u lahaayeen,tan ugo daran wax isbedel ah oo laga sameeyey ma jirin.
Allifkii kaa xumaada al baqra ku dhibaa.
Marka Puntland iminka waa meel haadaan ku sii socota oo u baahan in dib loogo noqdo si ka duwan,22 kii sano ee lago guuldaraystay,ee lago xasuusta musumaasuqa,boobka hantida dadwaynaha,baarlamaankii Puntland oo aan shaqayn waligii,waliw kan iyo kii maamulka Gaas ay ugo liiteen.
Arimaha aadka u fool xun ee musumaasuqa iyo ku tumashada dastuurka iyo saraynta sharciga waxaa sameeyey maamulka Deni iyo xildhibaanada la soo magacaabo oo noqday kuwo ka been sheegay dhaartii ay mareen markii ay si cad laalush uga qaateen Deni iyo Gaas oo ka wakiil ahaa ,shirkada DP World oo laga iibiyey mudo sodon sano ah Dakada Bossaso,ilaa iminka oo 4 sano ah,wali hal Dollar oo Dadka Bossaso lago balaarinayo la na hayo.
5 tii gobol ee Puntland dhisaay runtii wax badan ba ka baxay,nasiibdarada jirta ayaa ah in marka laga hadlayo arimahaasi been cad baa laga sheega.
Gunaanadkii Puntland shacabka ku nool qayb wayn bay ku leeyihiin waxa keenay fashilkaasi waayo ama waa ka aamuseen ama borobogandada maamulka musumaasuqa ku dhisan bay taageeraan.
Wax walba iminka Puntland waa fadhiid,shaqo la’aan,baahsan,ciidamo aan loo hayn mushaar oo la iska qoro,hadhowna dhib keena.
Awoodii maamulka Puntland oo had iyo goor si hal qof oo kaliya uu maruursaday.
Deni oo kaliya ma aha ee dhamaan ragii ka horeeyey sidaasi bay ahaayeen,waa in awood si miisaanan oo ah mida dastuurka Puntland uu qorayo oo ah.
2-golaha sharci dajinta.
3- maxkamada sare.
Waa in golaysha deegaanka ay doortaan dadka haljaadi degan oo aan loo xayiri,xisbiyada la waa soo socdaan.